माधव नेपालले आज हिन्दीमा बोलेको डाइलग चौतर्फी चर्चामा, के बोले त्यस्तो ? – GALAXY
माधव नेपालले आज हिन्दीमा बोलेको डाइलग चौतर्फी चर्चामा, के बोले त्यस्तो ?
१८ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हिन्दीमा बोलेको डाइलग चर्चामा आएको छ । उनले आफूहरुसँग टक्कर लिन खोज्नेहरु समाप्त हुने चेतावनी दिएका हुन् । आफूहरुसँग टक्कर लिन खोज्दा कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले उठ्नै नसक्ने हालतमा पुगेको पनि उनले बताए ।
आगामी निर्वाचनबारे विभिन्न ठाउँको आकलन गरिरहेको बताउँदै नेपालले भने, ‘आगामी चुनावमा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विजय अभियान अघि बढ्ने छ । हामी जित्ने छौं । हामीसँग इर्ष्या गर्नेहरुको हालत खत्तम हुनेछ ।’ ‘गठबन्धनलाई कसैले भत्काउन सक्दैन, छिटै चुनाव हुनेवाला छैन’
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले संघीय संसदको चुनाव समयमै हुने र पाँच दलीय गठबन्धनलाई कसैले भत्काउन नसक्नेसमेत बताए । ‘पाँच दलको एकता बलियो हुनेछ, यो गठबन्धनलाई कसैले भत्काउन सक्दैन,’ नेपालले भने, ‘छिटै चुनाव हुन्छ कि भनेर भ्रम नपाले हुन्छ । छिटै चुनाव हुनेवाला छैन । संघीय संसदको चुनाव समयमै हुनेछ ।’
उनले भ्रष्टाचार मुक्त भएको, सुशासनको मान्यतामा अगाडि बढेको, जनसेवाको मन्त्र बोकेको र समाजलाई परिवर्तनको दिशामा डोर्याउने सोचका साथ अगाडि बढ्न नेताहरुलाई निर्देशन दिए । आफूहरुले त्यही अनुसार मन्त्रीहरुलाई अगाडि बढाएका बताउँदै उनले भने, ‘राम्रो गर्नुहुन्छ भने बस्न सक्नुहुन्छ, राम्रो गर्नु भएन भने तपाईंहरुलाई कारबाही हुने छ, हटाइने छ ।’